Mon, May 25, 2020 at 1:46pm
आईतवार, मंसिर ८, २०७६ साल
काठमाडौँ, ८ मङ्सिर । शौचालयमा मोबाइलको प्रयोगले पायल्सको समस्या निम्त्याउन सक्छ । मोबाइलमा भिडियो नहेरेसम्म, गेम नखेलेसम्म, फेसबुक नचलाएसम्म शौच क्रिया फत्ते हुदैन । हामी हिजोआज मोबाइलको प्रयोगमा यति लिप्त भएका छौं कि ट्वाइलेट जाँदा पनि यसको साथको आवश्यकता पर्न थालेको छ । तर धेरैलाई थाहा नुहन सक्छ, ट्वाइलेटमा मोबाइलको प्रयोग अत्यन्त हानीकारक हुन सक्छ भन्ने कुरा । मानिसहरु ट्वाइलेटमा मोबाइल चलाउने सुरमा..
काठमाडौँ, ५ मंसिर जतिजति चिसो बढ्दै जान्छ, उतिउति तपाईंको स्वास्थ्य सन्तुलित राख्न कठिन हुँदै जान्छ । जाडोमा स्वस्थ कसरी रहने भन्ने धेरैको चिन्ता हुनसक्छ । जाडोबाट लाग्ने रोगबाट बच्नको लागि केही टिप्स यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं- बाहिरी चिसो वातावरणले गर्दा तपाईंलाई नियमित व्यायामको तालिका अनुसरण गर्न पनि चुनौती हुन्छ । त्यसैगरी घरमै बसिरहन मन लाग्छ र भोक पनि बढी लाग्छ । यस्तोमा..
काठमाडौं, मंसिर ४ आफ्नो जीवनशैली र खानपानमा ध्यान पुर्याउन सके प्राकृतिक तरिकाले नै मोटोपना हटाउन सकिन्छ । विहानको खाजा धेरै खानुहोस् । कम ब्रेकफास्टले दिउँसोको समयमा बढी भोक लाग्छ र आवश्यकताभन्दा बढी क्यालोरीयुक्त खाना खाइन्छ । पानीको मात्रा कम भएका पेयपदार्थ सकेसम्म कम खाने । साडा र जुस जस्ता पेयपदार्थमा चिनीको मात्रा बढी हुन्छ । जसले मोटोपना निम्त्याउँछ । चिस्याएका फलफूल र सागसब्जी खानुहोस्..
काठमाडौं, ३० कार्तिक स्वस्थ रहनका लागि मानिसले हरेक प्रकारका मेहनतहरु पनि गरिरहेको हुन्छ । यति गर्दा गर्दै पनि हामी कहिलेकाहीँ अस्वस्थ हुन्छौं, बिरामी पर्छौं । यद्यपि, हामीले केही साना–साना कुराहरुमा ध्यान दिन सक्यौं भने आफूलाई सकेसम्म स्वस्थ राख्न सफल हुनेछौं । आफूलाई स्वस्थ राख्न गरिने केही प्रयासहरु यस्ता छन् : खानामा नुनको मात्रा स्वस्थ शरीरका लागि हरेक दिन ५ ग्रामभन्दा कम नुन खानु..
एजेन्सी, २९ कात्तिक । मेकअप गर्नुअघि छाला पूर्ण रूपमा सफा हुनुपर्छ । मेकअप अनुहारको सौन्दर्यका लागि मात्र नभई सुरक्षाका लागि पनि गरिन्छ । यद्यपि, मेकअपमा प्रयोग हुने प्रडक्ट र आफ्नो छालाको नेचरबारे भने सचेत हुन आवश्यक हुन्छ । किनभने, खराब मेकअपले क्षणिक रूपमा सुन्दर देखिए पनि पछि कुरूपसमेत बनाउन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म प्राकृतिक मेकअप गर्नुपर्दछ । राम्रोसँग अनुहार सफा गरेर मात्र..
क्यानबेरा, २८ कात्तिक । गम्भीर प्रकृतिको मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिएका करिब दश लाख अष्ट्रेलियालीले उपचार नै नगराउने गरेका एक पछिल्लो अनुसन्धानमा देखिएको छ । प्रोडक्टिभीटी कमिसन नामक एक संस्थाको अनुसन्धानबाट मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या देखिए पनि बर्सेनि यति ठूलो संख्याका अष्ट्रेलियालीले उपाचार नै नगराएको पाइएको हो । अनुसन्धान अधिकारीहरुका अनुसार अष्ट्रेलियामा अहिले पनि करिब ४० लाख मानिस मानसिक स्वास्थ्यको समस्याबाट पीडित छन् । उनीहरुमा..
तुलसीपुर, २७ कात्तिक दाङ तुलसीपर उपमहानगरपालिका–७ नयाँबस्तीकी पवित्रा वादीले विगतमा एक महिनामा ५० भन्दा बढी मादल बिक्री गर्थे । पछिल्लो समय उहाँलाई सिजनमा पनि १५÷१६ वटा बेच्न धौधौ छ । “मादल बनाउने हाम्रो पुख्र्यौली पेशा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तर पछिल्लो समय हामीले बनाएका मादल नै बिक्न छाडेका छन्, यसले गर्दा हामी निराश भएका छौँ ।” चाडपर्वको समयमा केही बिक्ने भए पनि अन्य समयमा..
काठमाडौं, कार्तिक २६ देशभर दिनप्रतिदिन चिसो बढ्दै गएको मौसमविद्ले बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम यस वर्षकै कम देखिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मंगलबार बिहान काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम १०.८ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको हो । यो यस वर्षकै कम तापक्रम भएको मौसमविद्ले बताएका छन् । त्यस्तै अहिले (मंगलबार बिहान) देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा छ । आज..
एजेन्सी, २५ कात्तिक शरीरका कुनै क्षेत्र यस्ता संवेदनशील हुन्छन्, जहाँ पटक–पटक हात लगाउँदा विभिन्न संक्रमण हुनुका साथै रोग नै लाग्न सक्छ । कानमा कहिल्यै पनि औँला वा अरू वस्तुले पटक–पटक घोच्नुहुँदैन । मेडिसिन आफ युएससीको हेड एन्ट नेक सर्जरीका प्रमुख प्रोफेसर नोन के निपार्कोलेभ नेकाले भनेका छन्, ‘कानमा औँला या कुनै चिजले खोतल्दा झिल्ली फाट्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।’ छाला रोग विशेषज्ञ अदनान..
जाजरकोट, २४ कात्तिक विवाहमा केटाकेटीको नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र काम गर्न यहाँका पण्डित सहमत भएका छन् । जिल्लामा बालविवाह गर्नेको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्न थालेकाले प्रहरीसँगको सहकार्यमा पण्डितहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विवाह गराइदिनुअघि जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्र हेरेर मात्र विवाहको काम गर्न पण्डितहरु सहमत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक श्यामबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वरबधुको जन्मदर्ता..
काठमाडौँ, २२कात्तिक । विश्वका सबै भन्दा बढी प्रदुषित शहर भएको देशमा भारत पनि पर्छ । विश्वको प्रदुषित शहरको सूचीमा काठमाडौं पनि पर्छ । तर, दक्षिण एसियाली मुलुक भुटान भने यो मामिलामा भने सम्पन्न देखिएको छ । विश्वमै प्रदुषण मुक्त देशको रुपमा भुटानले परिचय बनाएको छ । यो उपलब्धीमा सरकारी नीतिको जति योगदान छ त्यति नै भुटानको जनताको पनि । भुटानको प्राकृतिक शौन्दर्यलाई देखेर..
चितवन, १९ कात्तिक । अमिक शेरचन राजनीतिसँगै इमान्दार, सदाचार र सादगी जीवन जिउने थोरै व्यक्तित्वमध्येमा पर्नुहुन्छ । जीवनको लामो समय भूमिगत र अर्धभूमिगत बिताउनुभएका उहाँ निर्भीक, निडर र इमान्दार पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यही सादगी नेता शेरचन अहिले गण्डकी प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको छ । विसं २००६ मा म्याग्दी जिल्लाको ओखरबोटखानी–९ मा जन्मनुभएका बडिबहादुर र उमादेवीका छोरा उहाँ हाल भरतपुर महानगरपालिका–२६ का स्थायी..
काठमाडौँ, १८ कात्तिक समयको अभावमा हामीहरु सधैं शरीरलाई मात्रै ख्याल गर्न पनि भ्याउँदैनौं । त्यसका कारण आफ्नो पेशाको आधारमा कस्तो अभ्यास गर्ने भन्ने जान्नु जरुरी हुन्छ । समय नहुँदा नहुँदै लामो समय अभ्यास गर्ने र खानामा ध्यान नदिने हो भने पनि यसले शरीरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैन । त्यसैले समयको अभाव भएको अवस्थामा थोरै अभ्यास गरेपनि खानामा ख्याल राखेर शरीर फिट..
काठमाडौँ, कात्तिक । दिनदिनै जाडो बढेको हामीले महसुष गरेकै छौं । हिजोभन्दा आज जाडो बढ्दैछ । सामान्यतः छालालाई ‘ड्राई’, ‘नर्मल’ र ‘ओइली’ गरी तीन प्रकारका हुन्छन् । तर जाडोमा भने ड्राई प्रकृतिका मात्र हैन सबैखाले छाला सुख्खा हुने समस्याले सताउने गर्छ । यसको अर्थ गर्मीमा नफूटने वा सुख्खा नहुने भन्ने होइन । जाडोमा बढी मात्रामा यो समस्या देखिने गर्छ । जाडो मौसम छालाको..
काठमाडौँ, ८ कात्तिक । नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड यमपञ्चक (तिहार) शुरु भएको छ । तिहारका बेला काग, कुकुर, गोरु र गाईको धुमधामले पूजा गरी माला लगाएर मीठामीठा परिकार खुवाउने चलन छ । गाईगोरु नहुनेहरु जसको घरमा छ, उसैकोमा गएर पूजा गर्नेको लर्काे नै लाग्छ । अघिपछि वास्ता नगर्ने सडकमा खोजीखोजी कुकुरलाई माला लगाउन तम्सन्छन् । माया गरेजस्तो गरी सेल्फी हानेर हतारहतार..
खस्यौली, ६ कात्तिक प्रदेश नं ५ लाई दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न प्रयास थालिएको छ । बुटवलस्थित नेपाल लाइभष्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना विकेन्द्रित आयोजना सहयोग एकाइमार्फत पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरण दूध तथा मासु उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेर स्वच्छ मासु र गुणस्तरीय दूध उपभोक्तासमक्ष पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । हावापानी अनुकुलन पशु विकास, गुणस्तरीय दूध र मासु उत्पादन,..
काठमाडौँ, ४ कात्तिक पश्चिमी भेगका केही स्थानमा आज (सोमबार) बिहानी पखको मौसम सामान्यतया सफा रहे पनि बाँकी भागमा भने बदलीको अवस्था रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यस्तै देशको मध्य तथा पूर्वी भूभागमा दिउँसो सामान्य बदली रहने तथा पश्चिमी भूभागमा आंशिक बदली रहने महाशाखाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । मौसमविदका अनुसार मध्य र पूर्वका थोरै स्थानहरुमा र पश्चिमका एक..
आईतवार, कार्तिक ३, २०७६ साल
काठमाडौं ३ कात्तिक । अनुसन्धाताहरुले मस्तिष्कको विनिर्माण प्रक्रियाबारे आधारभूत तथ्यहरु पत्ता लगाएका छन् । मानिसको आयु कति हुन्छ भन्ने कुरा व्यक्तिपिच्छे फरक पर्छ । आयु निर्धारण गर्ने विभिन्न पक्षहरु छन् । वंशाणुगत गुण, वातावरण, जीवनशैली आदी पर्छन् । नेचर जर्नलमा प्रकाशित भएको नयाँ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार व्यक्तिको मष्तिस्कको सक्रियताले आयुमा सीधा प्रभाव पार्छ । मष्तिस्कको सक्रियता र आयुबीच नकारात्मक सम्बन्ध रहेको पाइएको अनुसन्धान..
काठमाडौं, २ कात्तिक । के तपाई नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ । यदि तपाईको उत्तर कहिलेकाहीँ पिउँछु र पिएको बेलामा धेरै पिउँछु भन्ने आयो भने त्यो गलत हुनेछ । तर तपाईको उत्तर नियमित पिउँछु भन्ने आयो भने तुलनात्मक रूपमा तपाईको बानी ठीक छ भन्ने एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणकर्ताहरूको उक्त प्रतिवेदन युरोपेली हृदयरोग चिकित्सक समाजद्वारा प्रकाशित ‘इपी युरोपेस’ मार्फत् सार्वजनिक भएको हो..
आहाखबर, २ कार्तिक । हामी सबैको घरमा खाना त सधैं पाक्छ तर त्यो खाना एकैपटकमा खाएर सकिन्छ त ? कुनै दिन त त्यो सकिएला तर सधै त्यसो नहुन पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा प्रायः जसो मानिस भने त्यसलाई केही समय पछि वा भोलीपल्ट तताएर खाने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा नयाँ खाना बनाउने समय नभएपछि पनि मानिसहरु अघिल्लो दिनको खानालाई तताएर फेरि प्रयोग..
काठमाडौं, २९ असोज । रिसले हामीलाई खतरासँग लड्ने, श्रोतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने र सामाजिक मुल्यमान्यता लागु गर्ने स्वभाव दिएको छ । यो मष्तिष्कको ‘रिवार्ड सर्किट’मा बसेको छ । खतराको संकेत : कुनै विशेष परिस्थितीमा के हुन्छ भनेर हामी निरन्तर –प्रायः अर्धचेत – मुल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौं। हामीले सिकेको अपेक्षा र यथार्थबीच तालमेल नमिले हाम्रो मष्तिष्कको ‘रिवार्ड सर्किट’ले खतराको संकेत दिन्छ र ‘अमिगडला’ भनिने एउटा..
काठमाडौँ, २८ असोज नेपालबाट गत शनिबार मनसुन बाहिरिएसँगै देशभर चिसो बढ्नेक्रम शुरु भएको छ । मनसुनी वायु बाहिरिएसँगै न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम घट्दै जानेक्रम शुरु भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीले बताउनुभयो । “नेपाली वायुमण्डलमा पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै जाडोयाम शुरु हुन्छ”, मौसमविद् नगरकोटीले भन्नुभयो । पश्चिमी भू–मध्यसागरबाट उच्च वायुमण्डलमा न्यूनचापीय क्षेत्र बनेर उत्पन्न भएको बादल तथा अरब सागरबाट उत्पन्न वायुको प्रभावका..
काठमाडौँ, २७ असोज । विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्षको तिहारमा भारतबाट ल्याइने फूलको सङख्यामा कमी आउने भएको छ । पछिल्लो समय व्यावसायिकरूपमा फूल खेती गर्नेको सङख्या बढेको र यस वर्ष ठिक समयमानै तिहार पर्व परेकाले आयात गरिने फूलको सङख्यामा कमी आउने भएको हो । गत वर्ष भारतबाट रु ३० लाख बराबरको तीन लाख सयपत्री फूलको माला ल्याइएको थियो । यस वर्षको तिहारका..
काठमाडौं, २३ असोज सबै मानिसहरुको धनी बन्ने चाहना हुन्छ। तर केहीले मात्र त्यो मुकाम हासिल गर्न सकेका छन् । सत्य यो हो कि हामीलाई धनी हुनबाट रोक्नु भनेको सोचको भिन्नता हो । एक रिपोर्ट अनुसार तपाईंको सोचाईंले तपाईं धनी हुनुहुनेछ वा सामान्य जीवन बिताउन बाध्य हुनुपर्दछ भनेर देखाएको छ । केही खराब बानीले तपाईंको पैसालाई ओझेलमा पार्न सक्छ । केही खास..
काठमाडाैं, २२ असाेज । बुधबार पनि देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद्ले बताएका छन्। देशभर आंशिकदेखि सामान्यसम्म बदली रही थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्म वर्षा हुने सम्भावना देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखामा कार्यरत मौसमविद् गंगा नगरकोटीले जानकारी दिइन्। थोरै स्थानअन्तर्गत देशका जुनसुकै ठाउँ 'पूर्वदेखि पश्चिमसम्म' पर्ने मौसमविद्को भनाइ छ। आज पनि आफ्ना मान्यजनकहाँ दसैंको टीका लगाउन विभिन्न ठाउँमा यात्रा गर्नुपर्ने भएकाले मौसमले कुनै अवरोध..
मंगलवार, असोज २१, २०७६ साल
काठमाडौँ, २१ असोज हरेक मानिसलाई निन्द्राको आवश्यकता पर्छ । तर सबै मानिसलाई फरक–फकर किसिमको निन्द्राको आवश्यकता पर्ने गर्छ । यदि हामीलाई निन्द्रा पुगेको छैन भने सहजै थाहा पाउँछौं । तर आवश्यक निन्द्रा भनेको कति हो त ? त्यो पनि तपाईंको उमेरमा भर पर्ने कुरा हो । नियमित नसुत्ने, मदिरा, कफि, इनर्जी ड्रिक्संजस्ता पेय पदार्थको सेवन, अर्लाम घडी जस्ता कुराहरुले मानिसलाई प्रभाव पर्ने..
काठमाडाैं, २१ असाेज । मंगलबार बिहानैदेखि मौसम देशैभर बदली भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज दसैंको मुख्य दिन टीका लगाउने दिन हो। त्यसैले टीका लगाउन आफ्ना आफन्तकहाँ जान पर्नेहरूलाई मौसमले समस्या पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। ‘आज मौसम अलि डिस्टर्ब डिस्टर्ब नै छ,’ मौसमविद् विभूति पोखरलले भनिन्, ‘तर त्यस्तो आत्तिनपर्ने अवस्था छैन।’ उनका अनुसार आज मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा वर्षा..
काठमाडाैं, १६ असाेज । यात्रा धेरैका लागि एक रोमाञ्चक अनुभव हो । त्यसैले धेरैजसो यात्रु यात्रामा रमाउने गर्छन् । जबकि कतिपयका लागि भने यात्रा निकै कष्टकर हुनेगर्छ । कतिपयलाई यात्रा गर्दा गाडीमा टाउकाे दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने जस्ता समस्या हुने गर्दछन् । लामाे दुरीकाे यात्रा हाेस् या छाेटाे दुरीकाे कतिपय मानिसहरू वान्ता हुने समस्याबाट पिडित हुन्छन् । यात्रा गरिरहदा उनीहरु बिरामी नै..
काठमाडौं, १५ असोज कांक्रो स्वादिलो तथा रिफ्रेशिङ तरकारी हो । यसको प्रयोग सलादमा धेरैनै गरिन्छ । र धेरै मानिसहरुलाई कांक्रो खान मन पर्छ किनकि यसले रिफ्रेशिङ प्रदान गर्नुका साथै यसम अत्यधिक मात्रामा पोषण तत्व लुकेको हुन्छ । यसको खेतीगर्न पनि अति सजिलो छ । तर धेरै मानिसहरुलाई के थाहा छैन भने कांक्रोको प्रयोग धेरै तरिकाले गर्न सकिन्छ । ताजा नताछेको कांक्रोमा पोटासियम,..
एजेन्सी, १३ असोज जाडो निकै बढेको छ । चिसोका कारण रुघा खोकीको समस्या पनि निम्तिन्छ । खोकीका कारण मानिसले धेरै समयसम्म समेत दुस्ख पाउँछन् । कुनै कुनै खोकी त करिब १ महिना भन्दा बढी सम्म समेत लाग्ने हुन्छ । खोकी निको पार्ने केही घरेलु उपायहरू यस्ता छन्………… १. दश ग्राम अदुवाको रस महसँग मिसाएर चाटे लाभ हुन्छ । यस्तै, मिश्रीमा अमलाको धुलो..
Results 740: You are at page5of 25